I-GUS yasekwa ngo-2013 kwaye ibekwe eShenzhen, China. Umvelisi wezixhobo zeSMT oqeqeshiweyo. Inkampani ibonelela ikakhulu ngezisombululo zemigca yokuvelisa ye-SMT kunye neenkonzo zokwenza izixhobo ze-SMT. Sine-R & D yobungcali; imveliso; intengiso; emva kwamaqela athengisa. Iqela le-R & D elomeleleyo, iqela lokuphuhlisa isoftware, kunye neqela loyilo ngokubanzi leesekethe zombane kunye nokubonakala koomatshini kukhokelela kushishino ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu zihlala zikwindawo ephambili kolu shishino. Iqela lenkonzo yabathengi elinobuchule linokunika abathengi uluhlu olupheleleyo lokubonisana ngetekhnoloji yeeyure ezingama-24 kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa, ukuze abathengi bangabinangxaki. Siliqabane leJUKI kunye neHanwha / Samsung. Sinokubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo ye-SMT kunye nenkxaso ye-JUKI, Hanwha / Samsung, Yamaha kunye nePanasonic brand.
Ifilosofi yenkampani: Ngophuhliso olukhawulezayo lwentaba yokunyuka komhlaba kunye nokuphuculwa okuqhubekayo kwenqanaba lokuzenzekelayo, abathengi abaninzi nangakumbi bayayifuna. Inkampani iyangqinelana neemfuno zentengiso, iyaphuhlisa kwaye ivelise iimveliso ezikumgangatho ophezulu, ezingabizi kakhulu kubathengi, ilandela umgangatho wodidi lokuqala, ibonelela ngeenkonzo zodidi lokuqala, ivelise iimveliso zodidi lokuqala, kwaye yakha amashishini okuqala!
Umgangatho wenza ikamva
Jonga kwihlabathi ngokukhanya okwahlukileyo, kwaye uyakufumana into eyahlukileyo
Nxibelelana ngaphandle koxinzelelo
Unxibelelwano yinkqubo yokufunda ukujongana ubuso ngobuso. Iqela elinabantu abathathu kufuneka libe notitshala wam. Ukunxibelelana nengqondo evulekileyo kuya kuwenza umsebenzi ube lula kwaye usebenze ngakumbi.
Umgangatho womatshini ohleliyo ayisiyiyo le siyifunayo, kwaye koomatshini abantu ababonakala bethembekile, siya kuhlala sifumana indlela yokuphucula.
Ukuqinisekiswa kukhulu kunethiyori
Sukuxhoma umxholo ongaziwayo emlonyeni wakho, umgangatho ophezulu onokuthi ekugqibeleni uphume yeyona nto ikholisayo.
Ukuzimisela ngakumbi ukwabelana
Njengommeli wetekhnoloji ephezulu ye-SMT, ungawadlulisela njani amava kwimveliso nakwixabiso, ukuze amashishini amaninzi afumane amava ngokwabelana.
Ukuqonda okunzulu kweemfuno, ukuphucula inkqubo yonxibelelwano, ukunciphisa ixesha lonxibelelwano, ukuphucula ukusebenza konxibelelwano; Funda ngononophelo iimfuno zoqwalaselo lweskim.
Gxila kunxibelelwano olusebenzayo
Imfihlo yempumelelo ye-GUS kukuba simamela abathengi bethu, sinike ingqalelo kwinto abayifunayo nakwinto abakhathaleleyo.
Gcina unxibelelwano phakathi kweenjineli zeGUS kunye neenjineli zabathengi. Qeqesha ngakumbi iingcali ze-SMT ukufezekisa utshintshiselwano lobugcisa kunye nokuphucula amava.
Iimeko ezingaphezulu zabathengi zisinika ukuqinisekiswa okungcono, vumela abathengi babone isimo sethu sengqondo, bakhethe ukuhamba nathi.
Iqabane| Enkosi kubaxumi bangasentla ngenkxaso yabo eyomeleleyo, irenki azikho kulungelelwaniso oluthile